Global Voices teny Malagasy » Nampandany fitaovana vaovao hanaovana ny sivana amin’ny aterineto ny antenimieran-doholona meksikana, tsy niraharaha akory ny fombafombam-panaovan-dalàna · Global Voices teny Malagasy » Print
Nampandany fitaovana vaovao hanaovana ny sivana amin'ny aterineto ny antenimieran-doholona meksikana, tsy niraharaha akory ny fombafombam-panaovan-dalàna
Voadika ny 04 Mey 2018 5:43 GMT 1	 · Mpanoratra Giovanna Salazar, Jacobo Nájera Nandika (fr) i Manuel Alaver, Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Meksika, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Vaovao Mafana, GV Mpisolovava
Ny olana amin'ny sivana dia XXXXXXXXX. Saripika tao amin'ny Flickr, mpisera Cory Doctorow, araka ny lisansa CC BY-SA 2.0.
Lasa mihamora kokoa ny fanaovana sivana hifanaraka amin'ny lalàna ao Meksika, amin'ny fanitsiana ny lalànan'ny zon'ny mpamorona (mpanoratra).
Tamin'ny alakamisy 26 avrily, neken'ny antenimieran-doholona meksikana ny fanapahan-kevitra  manova ny lalàna federaly amin'ny zon'ny mpanoratra ; mamela ny mpitsara hamafa ny votoatin'ny aterineto iray manontolo izay heverina ho manitsakitsaka ny zon'ny mpanoratra (mpamorona), tsy mila porofoina amin'ny alalan'ny fitsarana na didim-pitsarana.
Ao anatin'ny fepetra noraisina, fampiatoana ny votoaty hitam-bahoaka, nefa ao ihany koa ny fanesorana ny fampitaovana teknika izay nahafahana nampiely azy, ho “antoka fisorohana”. Ankoatra izay, natao ankamehana ny fanekena ny fanitsiana, ary tsy natao araka ny voatondron'ny fombafombam-panaovan-dalàna. Niely tamin'ny alalan'ny tenirohy #MadrugueteAInternet (dona ratsy mihatra amin'ny aterineto):
Miisa 63 ny nanaiky, nanao #MadrugueteAInternet ny antenimieran-doholona meksikana ary manaiky ny fanitsiana ny lalànan'ny zon'ny mpamorona (mpanoratra) izay ahafahana manao sivana an-tserasera amin'ny alalan'ny zon'ny mpanoratra.
Notsikerain'ny fifandaminana, vondrona ary fikambanana miasa amin'ny lohahevitra mifandraika amin'ny zo nomerika, amin'ny aterineto ary amin'ny teknolojiam-baovao sy fifandraisana ity fanitsian-dalàna ity,, ary mampihevitra fa manoka-dalana mankany amin'ny sivana mialoha amin'ny aterineto ny fanavaozan-dalàna ary manimba ny fahalalaham-pitenenana eo amin'ny sehatra nomerika.
Etsy ankilany, nampitandrina  ny sampana meksikana ao amin'ny Wikimedia Foundation fa ny fanitsiana nekena dia «mametraka ho heloka bevava ny mandika soratra» ary «mametraka ho ara-dalàna ny asam-panitsakitsahana ny zo fototra sy ny zo ara-dalàmpanorenana amin'ny fanelezana hevitra, ny fahalalaham-pitenenana, ny famadihana ho pirinty, ny fifandraisan'olon-tsotra manokana, ny fampielezam-baovao. “
Amin'ny ankapobeny, ny fandraisana an-tanana rehetra na tolokevitra apetraka hifampidinihan'ny antenimieran-doholon'ny repoblika dia tsy maintsy mandalo fombafombam-panovan-dalàna  manokana izay toa tsy nohajaina.
Ny fombafomba dia efa mametraka fa ny tolokevitra (fisantaran'andraikitra) rehetra dia tsy maintsy mandalo adihevitra any amin'ireo vaomiera  araka ny lohahevitry ny tolotra na volavolan-dalàna, izay manadihady sy mifanakalo hevitra amin'izany, avy eo manomana sy mandàny volavolan-tetikasa. Rehefa ankatoavin'ny vaomiera isan-tokony miandraikitra izany ny lalàna, dia tsy maintsy ampahafantarina ny filohan'ny filan-kevitry ny antenimieran-doholona mba ahafahana azy ho atolotra sy holaniana amin'ny fivoriana itambarambe azon'ny rehetra atrehina.
Nanome fanamarihana ireo tsi-fanarahan-dalàna nataon'ireo senatera tao amin'ny tambajotra sosialy ny mpiserasera, nanosika mafy ny fanolorana ny tatitra alohan'ny fotoam-pivoriana itambarambe ny senatera :
Izaho ihany na misy hafa no miahiahy satria, tsy nampandalovina vaomiera, natolotr'i @JLozanoA teo anoloan'ny antenimieran-doholona ny fanitsiana ny lalàna federaly momba ny zon'ny mpamorona (mpanoratra) izay mametraka sivana amin'ny aterineto? Fa inona no nahazo an'i Meksika nahatonga ireo mpanao lalàna hanao izay tiany atao tsy manontany ny olom-pirenena?
@JLozanoA nanolotra tamin'ny antenimieran-doholona meksikana ny taratasy tsy misy sonia mba hanekena ny tatitra fanovana ny lalàna momba ny fizaka-manana ara-pahaizana.
Fihaikàna feno atao amin'ny demaokrasia izany sy kitoatoam-pahefana amin'ny fanaovan-dalàna
Avy amin'izany, toa nanao fanerena ny senatera hanova ny lahavolana, izay tsy ho azo notanterahina rahatsy nisy fankatoavana avy amin'ny filohan'ny birao, toerana izay tazonin'i Ernesto Cordero, izay nandany ny fanitsian-dalàna voalaza, amin'izao fotoana izao.
Efa nalefa tany amin'ny (fahefana) mpanatanteraka ny fanapahan-kevitra, ny fankatoavan'ny filoha sisa no andrasana mba hampanankery ny fanovana.
Ao anatin'izany toe-javatra izany, naneho ny fahalianany hanohitra ny fanapahan-kevitra  ny fifandaminana toy ny Tambajotra ho fiarovana ny zo nomerika (R3D)  tsy amin'ny fanerena hilazana azy ho tsy mifanaraka amin'ny lalampanorenana ihany fa mitaky ihany koa mba tsy ho atao manankery ny fanitsiana mandra-pilazan'ny Fitsarana izany. Fa raha tsy izany dia mety handany taona maro ny fombafombam-panoherana izany, fotoana izay tsy hanajana ny zo haneho hevitra malalaka ho an'ny mpiseraseran'ny aterineto.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/05/04/118856/
 neken'ny antenimieran-doholona meksikana ny fanapahan-kevitra: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dic_Cultura_art_213_Bis_215_LFDA.pdf
 lalàna federaly amin'ny zon'ny mpanoratra: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4907028&fecha=24/12/1996
 any amin'ireo vaomiera: http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=9&sm=2&t=I
 fahalianany hanohitra ny fanapahan-kevitra: https://www.youtube.com/watch?v=VDLYP4Hg7JY
 Tambajotra ho fiarovana ny zo nomerika (R3D): https://r3d.mx/